खेती गर्नेलाई अनुदान, जग्गा बाँझो राखे कर वृद्धि
काठमाडौं । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले खेती गर्नेलाई अनुदान रकम दिने निर्णय गरेको छ । कोरोनाले खाद्य संकट हुन सक्ने भन्दै गाउँपालिकाले कृषिमा प्रोत्साहन गर्न अन्नबाली र फलफूल खेती गर्नेलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।
अनुदान लिन चाहनेलाई १५ दिनभित्र वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्न गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ । बाँझो जग्गामा सुन्तला, कागतीलगायत फलफूल खेती गरेमा प्रतिरोपनी तीन हजार रूपैंयाका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाको निर्णयमा उल्लेख छ ।
बाँझो जग्गामा अन्नबाली, तरकारीबाली तथा मसलेदार खेती गरेमा प्रतिरोपनी चार हजार दरले अनुदान दिने गाउँपालिका प्रमुख भुपाल पोखरेलले बताए । लकडाउनका बेला गाउँपालिकाको तर्फबाट खाद्यान्न पाएका विपन्न र मजदुरले बाँझो जमिन लिजमा लिएर वा आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा खेती गरे प्रतिरोपनी पाँच हजारका दरले अनुदान रकम दिइने उनले बताए ।
तर कसैले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेको पाइए आगामी गाउँ सभाबाट पास हुने गरी भूमिकर वृद्धि गरिने पनि निर्णय भएको पोखरेलले बताए । अनुदान रकम लिन विगत २ वर्षदेखि खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको हुनुपर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
विभिन्न ११ स्थानबाट तरकारीको बिक्री गर्ने व्यवस्था
काठमाडौं । कोभिड–१९ को जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी रहेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले तरकारीको बिक्री वितरण गर्न विभिन्न ११ स्थान निर्धारण गरेको छ ।बल्खु र कालीमाटी तरकारी बजारको भीडभाड...
कुखुरा व्यवसायीकाे दैनिक २२ करोड नोक्सान
काठमाडौँ । हरेक साता ४२ लाख जिउँदो चल्ला खाल्डोमा पुरेर माउलाई दाना जोहो गरिरहेका छन् ‘ह्याचरी’ व्यवसायी । गोदाममा अण्डाको हेरिनसक्नुको थुप्रो छ । उता हुर्किएका ब्रोईलर कुखुरा पनि...
भिडभाड बढ्न थालेपछि कालीमाटी खुद्रा बजार बन्द
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शनिबारबाट लागू हुनेगरी लकडाउन अवधिभर खुद्रा बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । गत आइतबारबाट बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्ममात्र...
काठमाडौँमा बढ्यो तरकारी र फलफूलको मूल्य
काठमाडौं । गत सातासम्म प्रतिकिलो रु. ५० पर्ने गोलभेँडाको अहिले बजार मूल्य रु. १५० छ । एउटा कागतीको बजार मूल्य रु पाँच रहेकामा अहिले त्यसको तेब्बर अर्थात रु. १५ पुगेको छ । यो अवधिमा सागको...
बाली सखाप पारेपछि बाँदरको परिवार नियोजन गर्न माग
काठमाडौं । बाँदर पीडित किसानले हलो, जुवा, दाँते र कोदालोसहित विरोध र्‍यालीमा उत्रेका छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका किसानले बाँदर नियन्त्रणको भरपर्दो उपाय खोजी गर्न...